Isu tinogadzira zvigadzirwa zvine izvo zvemukati zvemukati senge machira, machira, polyester kuona kuti vatengi vedu vanakidzwe nehutano hwakanaka, hwakaringana, uye hunogara.
Nguva: 2019-11-20 Hits: 24
Isu tinogadzira zvigadzirwa zvine izvo zvemukati zvemukati senge machira, machira, polyester kuona kuti vatengi vedu vanakidzwe nehutano hwakanaka, hune hutano, uye hunogara.
2. Midziyo inovhara,pet throws and others
Yedu fekitori yapfuura Walmart yekuongorora, Target yekuongorora, Costco yekuongorora uye Sedex kuongorora kwatoitwa.
Nheyo yedu: tevedza tsika dzebhizinesi, teerera muchibvumirano chechibvumirano, namatira kumakwikwi akanaka uye teerera nekushamwaridzana kushandira pamwe.
Wese munhu muGreatex anonamatira kune iyi nheyo uye anoshanda nesimba kugutsa vatengi.
NEXT: Kambani yedu inopa mibairo uye kuvimbika. Isu tinoedza kuwana zvitsva mukugadzirwa kwechigadzirwa uye maitiro ekugadzirisa. Isu tinokuvimbisa iwe yakakwirira fashoni, yepamusoro mhando, kutumira panguva uye mutengo wakanaka.